कोरोनाले वदलिदिएको अमेरिकी तस्विर यस्तो छ ! – Complete Nepali News Portal
कोरोनाले वदलिदिएको अमेरिकी तस्विर यस्तो छ !
त्रसित मानिसका आंखा अगाडि मृत्यु नाचिरहेको छ आभाष हुन्छ । संसारका मानिसहरु उत्कृष्ट स्वास्थ सेवाका लागि अमेरिका रोज्छन् तर यतिवेला अमेरिकी स्वास्थ सेवा आफैं पीडित छ । चुपचाप पर्खिएर सरकारको कोरोना विरुद्धको अभियानमा सहयोग गर्नुभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन । शायद वरिष्ठ गीतकार कृष्णहरि वरालले संसारको यही अवस्थालाई वर्णन गर्नका लागि नै यी शव्द लेखेका होलान् – मर्ने कसैलाई रहर हुंदैन, तर नमरेको प्रहर हुंदैन, भागेर जाऊ, कुन ठाऊ जाउं, मान्छे नमर्ने शहर हुंदैन । – इनेप्लिज बाट